नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : कति सहनुहुन्छ छद्मभेसी सिधाकुरा नामको बिनोद कुमार नेपालको आतंक अमेरिकामा ?
कति सहनुहुन्छ छद्मभेसी सिधाकुरा नामको बिनोद कुमार नेपालको आतंक अमेरिकामा ?
म आफैले नै पत्रकार सम्मेलन गरेर दशकौ अघि नेपालको पत्र पत्रिकाहरुमा छ्याप छ्याप्ती छापिएको समाचार बोकेर के के न पाएँ जसरी मलाई नै देखाएर तर्साउन आउने भुराभुरिहरुलाई म यही status मार्फत जवाफ दिंदैछु ।
मेरो अरुलाई blackmailing गरेर पालिने श्रोत छैन। मैले आफैले मिहिनेत गरेर कमाएर खानु पर्छ। मुठ्ठी भरका तिमी केहि फुर्सदिला हुतिहाराहरुको जवाफ पटकै पिच्छे दिन फुर्सदिलो बसेको मान्छे पनि म होईन । धेरै काम छ मेरो । त्यसैले यहिं पढ अनि आ आफ्नो बाटो लाग ।
यहि माघ २३ गते "अमेरिकामा जिम्दो मान्छेको खोजी " शिर्षकमा एउटा कुपात्रको तथ्य के लेखेको थिएँ मुठ्ठी भरका त्यसका भरौटे नामर्दहरू सलबलाउन थालिसकेछन् । मैले मेरै बारेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको कुरा थाहा पाएर के के न उखाड्यौ भनेर मलाई नै तर्साउन खोज्दैछन। कठै! तिम्रा मर्दागीं ।
मेरो बिनम्र अनुरोध छ - नामर्द र हुतिहाराहरू मेरो आसपास नआउ । मलाई सार्है सकस हुन्छ । सबैभन्दा बढि घृणा मलाई हुतिहारा र नामर्दहरूसंग लाग्छ । पुरूषको नाममा सुरुवाल लगाएर ठिगं उभिएका पुत्लाहरू जो आफु मर्द हु भन्ने भ्रममा बाचेका छन् तिनलाई एउटै कुरा भन्छु तिमी पुरुष हुनु त परको कुरा पहिले मानव भएर त् बाच्न सिक । हुतिहारा गन्ध फैलाउन मेरो ऑगनमा नआउ । यो मेरो बगैंचा हो ।
अर्को कुरा तिमीहरू जस्तै मुठ्ठिभरका केहि झोले, भरौटे , पुरूषको नाममा ठिगं उभिएका पुत्लाहरू यो समाजमा भएकै कारण यो समाजमा sexual harassment र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध हुने हुन् ।
आफ्नो बहिनी, आमा वा छोरीलाई गएर यो नभन्नु कि मैले आज sexual harassment को बिरूद्द त्यो पनि आफुले भाषा सम्म नबुझ्ने बिदेशी भुमिमा भएको बेलामा आफुमाथि भएको दुर्ब्यबहारको बिरूद्द सशक्त आवाज उठाउने एउटा साहसि महिला सच्ची मैनालीलाई उसैको फेसबुक profile को कमेण्टमा गएर बिना सन्दर्भमा उसले आफ्नो अधिकारको निम्ति उठाएको आवाजलाई नै हतियार बनाएर खुबै तर्साएँ ।
यदि तिमीले तिम्रो आमालाई भन्यौ भने आमाले एक चडकन लगाएर भन्नुहुनेछ थुक्क कुलङगार! भोली तेरो बहिनी , छोरी वा म तेरो आमालाई नै यौन दुर्ब्यबहार गरे पनि त्यसै गर्छस? नबिर्सि ६ महिनाको दुधे बालक देखि ७० बर्षका हजुरआमाहरूलाई समेत नछोड्ने बलात्कारीहरू हाम्रै छिमेकमा छन् ।
उनी तिम्रो बहिनी भए सोध्लिन दाई, कसैले यौन दुर्ब्यबहार गरे चुपो लागेर बस्नुपर्छ हो?
उनी तिम्रो नाबालख छोरी भए भन्लिन बुवा मलाई अस्ति छिमेकी अंकल ले यता छुदै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो यस्तो गर्दै हुनुहुन्थ्यो । यस्तो कुरा कसैलाई भन्नु हुँदैन हो बुवा?
आज निर्मला पन्त बॉचेकि हुन्थिन भने तिमीहरू जस्तै कुरै नबुझि हरेक कुरामा बोल्नकै लागी जे बोलेपनि बोल्नै पर्ने फुर्सदिला हुतिहारा पुरूषहरू मिलेर उनलाई शायद बारम्बार मार्थ्यौ होला । निर्मला पन्त भाग्यमानि रहिछन् एक पटक मात्रै मरिन ।
कसैको चरित्रमा दाग लगाइदिने, कसैलाई deportation गरिदिने डर देखाउदै तिम्रा डलरको खेति गर्ने व्यवसाय र अन्य निर्दोष चेलीहरुलाई पटक पटक मार्ने अधिकार हामी तिमीहरुलाई कदापी दिदैनौ। हुति छ भने गरेर देखाउ Deport कसलाई गर्ने रहेछ ।
सधैं सुगा रटाई गरेर बिना बित्थामा डरछेरूवाहरूलाई नतर्साउ ।
जब जब यो जीवनमा greater cause को लागी लडेको छु, ढोल पिटेर लडेको छु । गर्जिएर लडेको छु। तिमिहरु जुन समाचारको लिंक राखेर मलाई तर्साउन खोज्दै छौ नि त्यसको खुलाशा मैले आफैले आफ्नै पैसाले हल भाडामा लिएर पत्रकार सम्मेलन गरेर गरेको हुँ । कुनै खोज पत्रकारले खोजेर पत्ता लगाएका होईनन् । पत्रकार सम्मेलन गरेको हल कचाकच भरिएर मान्छे अट्ने ठाउँ थिएन ।
जसको दुर्ब्यबहारको बिरुद्ध म पत्रकार सम्मेलन गर्न गईरहेको थिए त्यो दुराचारीको परिवारका सदस्यहरु भने पत्रकार सम्मेलन हुनु अघि नै हरेक संचार गृहमा रुदै फोन गरेर त्यो समाचार नछापि दिनुस् भनेर रुवाबाशी गरिरहेका थिए। पत्रकार सम्मेलन हुने हलमा जाने बाटोमा ढुकेर पत्रकार सम्मेलनमा नगई दिन बिन्ति भाउ गरिरहेका थिए। उ दुराचारी पुरुष थियो । साम, दाम, दण्ड, भेद लगाएर आफ्नो खोक्रो इज्जत बचाउनु उसको उद्देश्य थियो। म पितृसतात्मक समाजको महिला थिए जसले आफ्नो भबिश्य र बहुसंख्यक नेपालीले चिन्ने आफ्नै परिवारको इज्जत र आफ्नो भविष्य दाउमा राखेर आफ्नो मानव अधिकार र स्वाभिमानको लागी लडिरहेको थिए।
आज जुन समाचारलाइ आधार बनाएर के के न भेटे जसरी कुर्लिएर तिमीहरु मलाई आक्रमण गर्दैछौ त्यसको समाचार श्रोत म आफै नै हु। So Chill!
सच्चीको बिषयमा के के न थाहा पाए भनेर तीसमार खां बन्ने ब्यर्थ प्रयास कसैले नगर्दा हुन्छ। तीसमार खां त छोदिदेउ मेरो अदम्य साहस र स्वाभिमानको अघि तिमीहरु मात्रै भुसुना हौ। तिमीहरु यतिखेर म संग भाडाकुटी खेल्ने कोशिश गर्दैछौ तर मैले त दशकौ पहिले भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियानमा लागेर पत्रकारिता गर्दै गर्दा मेरो काम ले नै गोली पड्काई सकेको छु। त्यसको अभिलेख खोज्न परे रेडियो नेपाल जानु। अनि मैले कस्ता कस्ता र कति भयानक आक्रमण झेलेको छु त्यसका साक्षीहरू आज नेपालका बिभिन्न ओहदामा रहेका बरिष्ठहरूमा गनिनु हुन्छ। सोध्न जानु, भनि दिनुहुन्छ । बॉकिं आक्रमणका फेहरिस्त म आफुसंग समय भएपछि र समय आएपछि म आफै सार्बजनिक गर्ने सोच मा थिए र छु।
मेरो परिणाममुखि काम मैले त्यति खेर देखाई सकेको छु जतिखेर सामाजिक संजाल पनि थिएन। तिमीले मलाई आज मात्रै चिन्यौ होला तर मेरो परिणाम सहितको कामले मलाई आज होइन दशकौ पहिले नै धेरै भन्दा धेरै नेपालीहरू बिच चिनाई सकेको थियो।
उ बेला त्यो फुच्ची सच्चीले त्यो पनि भ्रष्टाचार विरुद्द अभियान सहितको पत्रकारिता गर्दा रमाइलो को लागी गरेकी थिई भन्ने भ्रममा नपर्नु। पुरै होस् हवासमा सिरमा कफन बाधेर सुरु गरेकी थिई त्यति खेरको फुच्ची सच्चीले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती , अनियमितता , दण्डहीनता बिरुद्दको लडाईको त्यो कठिन यात्रा ।
आज त्यो फुच्ची सच्ची ठुली मात्रै भएकी होइन निकै खारिई पनि सकेकी छे। उतिबेलाको फुच्चीलाइ उति खेरका बरिष्ठहरुले पनि सक्न खोजेका थिए तर सकेनन। आज उनीहरु घरदेशको सर्बोच्च निकायको पनि अतिनै शक्तिशाली पदमा छन् । बुझी हेर्नु। त्यसका पनि अभिलेख छन्। सोच, त्यो फुच्चीले के के भोगेकी होली ? त्यसैले भन्छु तिमीहरु मेरो निम्ति भुसुना मात्रै हौ। मेरो साटो अन्यत्र प्रयाश गरे २/४ हजार डलर थप झर्ला। यता गलत ठाउँ पर्यो यता बाट त् comment मात्रै पनि निकै गार्हो संग झर्छ। म तिमीहरु लाइ कठै मात्रै भन्न सक्छु।
मेरो अर्को पनि बिनम्र अनुरोध छ , मेरो समय बर्बाद नगर। म मेरो ब्यस्त जीवनबाट अलिकति मात्रै भएपनि समय निकालेर मेरो मातृभूमिको घाउमा आफुले सकेको मल्हम लगाउन चाहन्छु।
म “सच्चीको साथमा” कार्यक्रम मात्रै चलाउदिन त्यसको अतिरिक्त पर्दा पछाडी धेरै काम गरिरहेको हुन्छु। विभिन्न समस्यामा परेका महिलाहरुले सहयोग माग्दा आफुले जाने बुजेको जति सहयोग गर्छु। सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गराई दिने प्रयास गर्छु। हाम्रै नेपाली संस्था अधिकारमा पनि केही लाइ पठाएको छु। भाइरल हुने रहर भए सजिलै भाइरल हुन सक्ने धेरै काम गरेको छु। एउटा पीडित लाइ सहयोग मात्रै गर्न खोज्दा पनि घन्टौ त फोनमा मात्रै बिताउनु पर्छ।
मेरै व्यक्तिगत सहयोग र मध्यस्तताको कारण अमेरिकामा आफ्नै श्रीमानद्वारा घरबाट निकालिएकी र झन्डै कागज बिहिन सम्म बनाइएकि बहिनिले सहारा पाईन, काम पाईन , छत् पाईन र गत साल मात्रै अमेरिकाको ग्रीन कार्ड फाईल गर्ने दिन खुसि हुदै फोन गरेर भनिन - दिदि, आज म ग्रीन कार्ड बनाउन जादै छु। उनलाई मेरो एउटा आग्रहमा सहयोग गर्ने मनकारी ब्यबसायी आदरणीय दाइ भाउजु यही मेरो नजिकैको साक्षी हुनुहुन्छ। तिमीहरु संग अनावश्यक जुवारी खेलेर बस्नु भन्दा म त्यस्ता काम गर्न रुचाउँछु, एउटैको किन नहोस ऑसु पुछ्न चाहन्छु । तिमीहरु संग लडाई र बहस गर्न नसकेर होइन, मात्रै समय नभएर ।
म आफै समाचार श्रोत भएर बनेको समाचारको ढ्यांग्रो पिटेर मलाई जिस्क्याउन नआउ। मलाई थाहा छ मेरो काम मन पराएर मलाई मनै देखि माया गर्ने घरदेश र परदेशमा धेरै हुनुहुन्छ। यो पनि सत्य हो मेरो अस्तित्व नै मेटाउन चाहने शत्रुहरु पनि त्यतिकै छन्। को कता बाट परिचालित छ त्यसको खोजि गर्न म जरुरि सम्झिदिन । जुन क्षण जरुरत पर्छ तिम्रा सात पुस्ते निकाल्ने हैसियत् म संग अझै बाकि छ।
आक्रमण नै गर्नु पर्ने भएपनि केहि नयॉ कुरा लिएर आक्रमण गरन हो । म आफै समाचार श्रोत रहेको मेरो त्यो समाचार दशकौं पुरानो समाचार हो। बिहानको समाचार बेलुका बासि हुने युगमा छौ हामी तिमी कहाँ छौ? Grow up kiddos!
नोट: अमेरिकामा जिम्दो मान्छेको खोजी अहिलेसम्म ८ हजारले पढेछन् वा शेयर गरेछन् । यहि बिचबाट एउटा जिम्दो मान्छे भेटिईनेछ भन्ने कुरामा अझै आशाबादी छु । सबैको जय होस् !
आज भन्दा ५ बर्ष अगाडि रामप्रसाद खनालले नेपाल मदरमा लेखेको एउटा लिखत यस्तो छ हेर्नुस् तल !